2017 May 11 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
DEG-DEG+AKHRISO:- War-Murtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii London
LONDON(P-TIMES)-War murtiyeed oo ka kooban dhowr bog ayaa laga soo saaray shirkii arimaha Soomaaliya ee London, ayadoo ay si wadajir ah shir gudoominayeen dowladda UK, madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo xoghayaha guud ee qaramada midoobey ee Antonio Guteres. Waxaa ka qeybgalay shirkaasi in ka badan 42 dowladood iyo ururo caalami ah oo daneynaya […]
WAR DEG DEG AH: Shirkii London oo soo xirmay & M/weynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay…
LONDON(P-TIMES)- Shirka caalamiga ah ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, kaas oo ay ka qeybgaleen 42 wadan madaxda ka socota ayaa hadda dhamaaday, waxaana dhamaadkiisii khudbad ka jeediyey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa u mahadceliyey ka qeybgalayaasha oo uu sheegay in ay waqtigoodu maanta u hureen sidii Soomaaliya ay dawladnimadeeda u soo ceshan […]
DAAWO: Shirka London oo hadda xirmaya & Madaxda Caalamka oo hadlaya
LONDON(P-TIMES)- Shirka Caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa hadda xirmaya, waxaana la jeedinayaa warmurtiyeed iyo balan qaadyada ay jeedinayaan wadamada caalamka. Ilaa hadda Malaayiin Dollar ayaa lagu yaboohay, kaas oo ku aadan arrimaah dhaqaalaha la siinayo Soomaaliya, si gaar ah ayaa dhinacyadu ay uga hadlayaan arrimaha ku aadan dhaqaalaha. Deymaha qaarkood ayaa la […]
TOPNEWS: RW Itoobiya oo ku dhawaaqay war aan laga fileyn wadamada jaarka la ah Soomaaliya
LONDON(P-TIMES)- Raysalwasaaraha dawladda Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa kaga dhawaaqay shirka London oo goor dhaw soo xirmay in ay Soomaaliya waajib tahay in laga qaado Xayiraadda hubka ee mudada dheer saaran. Raysalwasaaraha ayaa cadeeyey in ay Soomaaliya u baahan cudud ciidan oo dhameystiran, taasna ay ku imaan karto iyadoo la hubeeyo ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed. Mar […]
WAR DEG DEG AH+AKHRISO: RW Kheyre oo ku dhawaaqay 14 go’aan oo si adag u taabaya Madaxda DF, kana dhaqangalaya Muqdisho
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta shirkoodii caadiga ahaa isugu yimid ayaa soo saaray go’aano la xiriira amniga Caasimadda, iyadoo la sameeyay ciidan wada jir ah oo ka qeyb qaadana howl galada xasilinta Caasimadda. Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale mamnuucay in magaalada ay ku socdaan, ciidamo hubeysan iyo gaadiidka dagaalka ee aan ku jirin ciidamada howl […]
DEG DEG: RW Soomaaliya oo amar adag baxshay & Taliyaasha ciidamada oo loo yeeray
MUQDISHO(P-TIMES)- Raysalwasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa amray in gabi ahaanba laga mamnuucay gaadiidka hubeysan ee Tiknida loo yaqaano, jidadka iyo wadooyinka caasumada Soomaaliya, haddii aysan ku jirin howlgal aysan ogeyn Taliyaha ciidamada Xasilinta Amniga caasumada. Raysalwasaare Kheyre ayaa warkan ka sheegay kulankii golaha Xukuumada Faderaalka ee dalka, wuxuu kaloo cadeeyey in la dhisayo […]
XOG XASAASI AH: Maxay ka dhaheen Itoobiya, Kenya & Jabuuti qaadida Xayiraadda Hubka ee Soomaaliya?
LONDON(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay shirka goor dhaw lagu soo xirayo magaalada London ayaa ka dalbaday golaha Amaanka ee QM in ay qaadaan gabi ahaanba xayiraadda hubka ee Soomaaliya, lagu soo rogay 1991-dii. Hadalkaas ayaa dareen-galiyey ka qeybgalayaasha shirkan oo ay ugu horeeyaan Madaxda jaarka la ah Soomaaliya, gaar […]
BREAKING: Xoghayaha Guud ee QM oo ku dhawaaqay war deg deg ah oo ku saabsan Soomaaliya
LONDON(P-TIMES)- Xoghayaha guud ee Qaramada Midowbay oo hadda ka hadlaya shirka London ka furmay ayaa ku dhawaaqay in ay Soomaaliya ka soo baxday wadamada haray, oo ay hadda asaageed la tartamayso, ayna arrintaas tahay war wanaagsan oo Caalamka farxad galinaya. Xoghayaha guud wuxuu amaan iyo bogaadin u soo jeediyey Hogaamiyaasha Soomaalida oo uu sheegay in […]
DEG DEG+LIVE: M/weyne Farmaajo oo ku dhawaaqay in la qaado Xayiraadda Hubka ee Soomaaliya
LONDON(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda kaga dhawaaqay shirka London ka furmay in ay ka codsanayaan golaha Amaanka ee Qaramada Midowbay in la qaado xayiraada hubka ee saaran dalka, taas oo la soo rogay sannadkii 1991-dii. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay Shabaab ka saarayaan Soomaaliya 2 sanno gudahood, wuxuu […]
WAR DEG DEG+DAAWO: Madaxweynaha Soomaaliya oo hadda kaga dhawaaqay Shirka LONDON in 2 sanno….
LONDON(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda kaga dhawaaqay shirka London ka furmay 30 daqiiqo ka hor in ay Shabaab uga saarayaan Soomaaliya 2 sano gudahood. Madaxweynaha ayaa codsaday in laga qeyb noqdo dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, wuxuu sheegay in si ciidamadaas loo dhiso lo baahan yahay taageero […]